Ciidanka Xooga dalka Soomaaliya oo howlgal ku soo qabtay dad tiro badan [Maqal]
Ciidamada dawlada oo iskugu jira kuwo biliiska iyo nabad sugida soomaaliya ayaa howlgalo ay qaadeen xalay ilaa maanta gacanta kusoo dhigan dad kor u dhaafaya kun iyo shan-boqol oo qof,waxayna howlgaladaasi ka fuliyeen xaafadaha degmada wadajir ee gobalka Banaadir.
Ciidanka difaaca Soomaliya ayaa howlgaladaani bilaabay xalay saqdii dhexe,waxayna ku dabo joogaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa haraadiga kooxda kasoo horjeeda amniga iyo jiritaanka Soomaaliya ee shabab waxayna maanta bilaabeen laamaha amniga sidii dadkaasi faraha badan ee gacanta lagu soo dhigen baaritaano rasmiya loogu samayn lahaa.
Taliyaha Ciidanka booliska Gobalka Banaadir Jenaraal-Axmad Xasan Maalin oo la hadlayay warbaahinta ayaa shaaciyay inay ka go'an tahay sidii dalka oo idin looga sifayn lahaa kooxda shabab oo xiriirka la leh Alqaacida,wuxuna sheegay baaritaano tiro badan oo ay ku sameeyeen dadkii lasoo qabtay ay u suurta gashay ciidanka amniga inay tuhun toos ah ku beegsadaan dad kor u dhaafaya boqol qof oo laga eedaynayo inay la shaqeeyeen kooxda shabaab.
Docda kale Taliye Maalin waxa uu sheegay inay qorshaha dowlada fadaraalka ah ee Soomaaliya ugu jirto sidii gobalada la qabsaday alshabab looga samayn lahaa howlgalo caynkaan oo kale,wuxuse ugu danbayntii Maalin shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay laamaha amniga la shaqeeyeen oo ay kusoo wargaliyeen hadiiba ay helleen xogaha tilmaamaya kooxda shabaab.
Waa howlgalkii ugu balaarna oo ay ciidanka dowlada fadaraalka Soomaaliya kusoo qabtaan dad gaaraya 1714-qof.lagana fuliya caasumada Soomaaliya ee muqdisho,waxaase jira howlgalo kale oo alshabab lagu dabar goynayo oo ka socda gobalada kale ee dalka sida gobalada Puntland.
ADEER MEESHA CIIDAN MAJIREE MAA BEENTA DAYSID, MEESHA TUUG BAA JIRTA MAADAMA UU JOOGO DAMJADED MARAKANKA AYAA LA RABAA IN LAGAA GADO FILIMKAAN ADNA WAA NAGA GADAYSAAA WAX BARTA KUWIINA IDAACADAHA LOHOO POST A COMMENT